Waxaa soo yaraanaya gacan-ka-hadalka ka dhaca guryaha dibeddooda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waxaa soo yaraanaya gacan-ka-hadalka ka dhaca guryaha dibeddooda
La daabacay måndag 12 augusti 2013 kl 15.36
Waxaa warbixin tirakoob ah oo uu soo saaray Guddiga ka hortagga dembiyada oo afka iswiidhishka loogu yeero Brottförebyggande rådet ayaa lagu muujiyey tirada gacan-ka-hadalka xoogga ku dhisay ay isa soo dhimayaan. Annika Lindahl oo ka socota qaybta la dagaalanka dembiyada ee boliiska magaalada Stockholm ayaa ka tiri:
– Hadda sidii hore waa ay ka deggan tahay. Waxaan qabaa in in aan ka miradhalinnay shaqooyinkii ka hortagga dembiyada, kuwaas oo qayb ka ahaa shaqooyinka aan qabanno.
Sida ku qoran tirakoobka uu guddiga ka hortagga dembiyadu soo saaray waxaa sannadkaan lixdii bilood oo ugu horreeyey la soo gudbiyey 15000 oo dhacdooyin gacan-ka-hadal ah oo ka dhacay guryaha dibeddooda. Lixdii bilood oo ugu horreysey sannadkii 2009, waxay tiradaasi gaareysey 20000 oo dhacdo, taasina waa hoos u dhac u dhigma boqolkiiba 20.
Guddiga ka hortagga dembiyadu wuxuu qabaa in sababaha hoos u dhaca keenay ay ka mid tahay in dhawrsanaanta dadka oo hadda noqotay wax waqtiga la socda, gaar ahaan dadka dhallinta yar, iyo in cabbitaanka aalkahoolku soo yaraaday.
Dhanka kale caalinka caanka ah ee cilmiga dembiyada Jerzy Sarnecki ayaa ku sifeeyey gacan-ka-hadalka guryaha dibeddooda oo soo yaraaday in ay ugu wacan tahay xaalad isbeddel ah oo ka socota dalalka reer galbeedka.
– Waxaa hadda socota xadaarad cusub oo ilbaxnimo ah oo in xoog wax lagu xalliyo ka dhigeysa mid aqbaliddiisu yaraato. Waxaan qabaa in dadku ay sidii hore ka soo ilbaxeen, ayuu yiri Jerzy Sarnecki.
Balse in kastoo ay daraasooyin badani muujinayaan in xoog-isticmaalka iyo gacan-ka-hadalku ay soo yaraadeen, ayuu guddiga ka hortagga dembiyada qabaa in shaqooyinka ka hortagga ah ee boliisku qabto ay ka mid yihiin sababaha ay u yaraadeen falalka xoog-isticmaalka ama gacan-ka-hadalku.
Qaybo badan oo dalka ka tirsan ayuu boliisku sannadihii ugu dambeeyey ka abaabulay olole ah in ay aad uga muuqdaan meelaha ay badanaaba ka dhacaan falalkaasi. Tusaale ahaan maqaayadaha hortooda xilliga xiritaanka.
Boliiska magaalada Stockholm ayaa sanooyinkii dambe bilaabay in ay meelo gaar ah abbaaraan, iyadoo la sameeyey koox loogu yeero boliiska kormeerka maqaayadaha.
– Waxaa meelahaas ka mid ahaa meelo badan oo dadku ku kulmaan oo ay marar badan ka dhaceen falal gacan-ka-hadal. Waxaana suurtagashay in goobjoogga boliiska kormeerka maqaayaduhu uu keento in ay falalkii gacan-ka-hadalku halkaas ka joogsadaan.
Maxaad hadda ku talajirtaan in aad sameysaan si aysan xaaladda wax isaga beddelin?
– Sidaas ayaan u sii wadeynnaa oo kama daaleynno. Waxaase caado ah in mar walba la eego sida wax loo qorsheeyey. Waxaan hadda damacsanahay inaan tijaabinno mas’uuliyadda shicibka oo aan eegno sida ay u dhaqmaan. Waxaan kaloo dareensanahay in ay tahay wax laga tegey in mar walba laga hadlo inaan dadka ka dhex muuqanno iyo in aan aamminno in wax waliba iskood isu xallinayaan, ayey yiri Annika Lindahl.